Spoutable: doka zanatany ho an'ireo mpitsidika hiala | Martech Zone
Raha mpitory ianao dia fanamby foana ny fanonerana ny mpihaino anao - indrindra raha eo amin'ny tranokalan'ny fampahalalana ianao. Asehoy fa tsy dia misy vokany firy ny dokam-barotra raha ampitahaina amin'ny fomba doka hafa, noho izany dia tsy mahazo manao doka kendrena be loatra ireo mpikaroka amin'ny fikarohana sy sosialy. Fampirantiana zanatany tonga ho fitaovana hitarika fidiram-bola ho an'ny mpanonta - saingy efa nanoratra teo aloha aho fa afaka mitaky vola amin'ny fahatokisan'ny marika izany.
Spoutable Mety hanana ny vahaolana mety indrindra - ary efa nandramantsika azy io eto hatrany Martech Zone. Miaraka amin'ireo doka izay mandeha ao anaty atiny (izay mety ho mahatsikaiky), dia manolotra fivoahana vahaolana tena tsara izany. Rehefa misy olona miomana handao ny tranokalanao, tsara tarehy over-laika miseho ny tontonana izay manolotra safidy vitsivitsy ho an'ny mpampiasa. Ao amin'ny tranokalanay, ny tontonana dia mamoaka lahatsoratra valo izay atokana ho an'ny mpihaino anay.
Spoutable dia manolotra toerana maro hafa izay miasa amin'ny birao sy amin'ny finday:
Tena tiako ity vahaolana ity satria tsy manelingelina ny mpampiasa efa mandray anjara mankafy ny tranokalanay izany. Izay mpampiasa efa nivoaka ny tranokala ihany no aseho azy. Na ny mpanao dokam-barotra na ny mpitory dia afaka manara-maso ny fandaniany amin'ny fotoana tena izy.
Fambara: mpiara-miasa amin'i Spoutable.
Tags: fivoahanafivoahana over-layfitenin'ny teratanyteratany dokam-barotraover-laikaspoutable
Sep 25, 2017 ao amin'ny 6: PM PM
Manana cpm tena mahatsiravina izy ireo ho an'ny mpanonta. Ary maro amin'ireo mampiasa fanakanana doka no tsy mahita ny doka fivoahana na izany aza.